China BASEBALL iimbasa mveliso kunye nabenzi | UKumkani
IiMbasa zethu zeBhola ekhatywayo ziqinisekile ukuba ziyaqhutywa ekhaya nabadlali bakho! Iibhanti zeSIMA SIMAHLA kunye nezinto ezininzi onokukhetha kuzo. Sibabethile abo sikhuphisana nabo, kwaye unentembelo eyongeziweyo yokujongana nomenzi weembasa owaziwayo kunye namawaka wabathengi abonelisekileyo! Thenga ukhetho lwethu olukhulu lweeMedali zeBaseball apha ngezantsi, kwaye ujonge izaphulelo zeembasa zethu zebhola ngokukhetha imbasa engezantsi! Sizame konke okusemandleni ethu ukubonelela ngokukhetha okuhle kweemedali zebaseball esemgangathweni kunye nokukhethwa kweembasa ezithile zebhola. Ndiyathemba ukuba uya kuvuma ukuba ukukhethwa kweembasa zethu zebaseball zikumgangatho ophezulu, kwaye zahluke ngokwaneleyo ukwenza amabhaso akho abukeke ngathi abaleke ekhaya. Sikwaphethe ukhetho oluhle lweeNdebe zeBhola kunye neePlaque.
I-baseball ibuyile kwaye sineendebe zebhola kunye neembasa zakho zokukhumbula i-epic (ukuba ilibazisekile) ixesha le-2020. Khetha phakathi kwamacwecwe ethu eplati kunye neyona nto siyithandayo, i-baseball glove trophy. Ifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo, izitayile kunye nemibala, sinento nganye kwisitayile kunye nohlahlo-lwabiwo mali, kwaye kunjalo, ukukrola simahla nokungasikelwanga mda! Yenza indebe yakho ye-baseball namhlanje kwaye ugcine ngamaxabiso ethu asezantsi kunye nezaphulelo zobungakanani!
Egqithileyo IIMBALI ZOLWAZI
Okulandelayo: Iimbasa zeBhola yeBhasikithi